Wasiir Beyle oo Hambalyo u diray Madaxweynaha Bangiga Horumarinta Afrika oo mar kale xilkaas loo Doortay.
Muqdisho:- Sii hayaha Wasiirka Maaliyadda ee Soomaaliya Dr Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa aaladda fogaan aragga uga qeyb galay shir lagu dooranayay Madaxweynaha Bangiga Horumarinta Afrika (AFDB), kaasi oo uu markale Dr Akinwumi Adesina dib loogu doortay.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya ayaa bartiisa ku soo qoray “Waxaa maanta inoo soo gaba-gaboobay shir soconayay mudo labo maalmood ah oo lagu dooranayay Madaxweynaha Bangiga Horumarinta Afrika (AFDB), waxa aan hambalyo u dirayaa Dr Akinwumi Adesina oo maanta mar kale dib loogu doortay xilka Madaxweynaha Bangiga Horumarinta Afrika”.
Dr Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa Bangiga Horumarinta Afrika uga mahadceliyay doorkii uu ka qaatay hannaanka deyn cafiska Soomaaliya.
“Waxa aan u mahadcelinayaa Bangiga Horumarinta Afrika oo taageero joogta ah siiya Dowladda Federal Soomaaliya, sidoo kalena gacan weyn ka geystay hanaanka Deyn Cafinta Soomaaliya”. Ayuu yiri Wasiir Beyle.